Ny mpitrandraka ahitra paraky (na tsotra grinder) dia fitaovana varingarina misy fizarana 4 izay misaraka ary misy nify na fantsika mifanaraka amin'ny fomba iray ka rehefa avadika ny tapany ambony dia simba ny fitaovana ao anatiny. Ny tapany faha-3 dia voaangona vitsivitsy notetehina tao amin'ny efi-trano ambany ary sivana ny kief. Ny tapany faha-4 dia angonina ny kief.
Ny olona sasany dia te-mametraka lanja ao amin'ny efi-kief mba hanampy handondona ny resina avy eo amin'ny efijery ao anaty lovia any ambany. Ny denaria na nikela voadio dia miasa tanteraka amin'izany.
Na dia nilaza aza ny mpamokatra fa natao hampiasaina amin'ny zava-maniry sy zava-manitra ho an'ny fahandroana izy ireo, dia matetika no zatra manimba, ka vokatr'izany dia misy vokatra izay azo soloina mora kokoa amin'ny tanana ho "mpiray" mirehitra mirindra kokoa. Matetika vita amin'ny vy na plastika ireo mpitrandraka ahitra paraky ary tonga amin'ny loko isan-karazany sy metaly voadio.
Teo aloha: Mpitrotro fifohana sigara
Manaraka: Fitaovana masinina vita amin'ny Custom Custom manokana
mpitresina ahitra alimo